Wararkii ugu dambeeyay wafdiga Shariifka ee laga hor istaagay safarkoodii Baledweyne | Dhacdo.com
Home Wararka Maanta Wararkii ugu dambeeyay wafdiga Shariifka ee laga hor istaagay safarkoodii Baledweyne
Wararkii ugu dambeeyay wafdiga Shariifka ee laga hor istaagay safarkoodii Baledweyne
Xilli maanta la fillaayay inay Magaalada Baledweyne gaaraan xubno uu horkacayo Gudoomiyaha Xisbiyada Madasha Qaran, Shariif Sheekh Axmed ayaa waxaa laga hor istaagay in ay ka dhoofaan Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho.
Maamulka Garoonka Aadan Cadde ayaa Shariif Sheekh Axmed oo xubnaha safarkan ku wehlinaya uu ka mid yahay Xasan Sheekh Maxamuud, Madaxweynihii hore ee Somaliya u sheegay in aanay maanta taggi karin Magaalada Baledweyne.
Maamulka Garoonka ayaa tani ku sababeeyay, iyadoo maanta lagu wado inay Magaalada Baledweyne gaaraan masuuliyiin uu ugu sareeyo Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, Xasan Cali Khayre.
Sidoo kale shaqaalaha diyaarad gaar loo leeyahay oo wafdiga Shariif Sheekh Axmed u qaadi laheyd Magaalada Baledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa lagu wargeliyay in ay ka baaqsato safarkeeda Baledweyne.
22-kii bishii September ayay ahayd markii wafdi uu hoggaaminayay Shariif Sheekh Axmed, Madaxweynihii hore ee Somaliya laga hor istaagay safar ay ku taggi lahaayen Magaalada Kismaayo, iyagoo xilligaasi doonayay in ay Kismaayo kaga qaybgalaan caleemo saarka Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam.